पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान्छुः सभापति श्रेष्ठ - Hamrokhotang
Home » News » पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान्छुः सभापति श्रेष्ठ
पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान्छुः सभापति श्रेष्ठ
खोटाङ, ८ फागुन । नेपाली काँग्रेस खोटाङका जिल्ला सभापति नरेशकुमार श्रेष्ठले आगामी दिनमा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने बताउनुभएको छ । छैटौं जिल्ला अधिवेशनबाट सभापतिमा विजयी भएपछि शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सभापति श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो ।
दिक्तेलस्थित सगरमाथा होटलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टीको कामसँगै जिल्लाको विकासका लागि सदैव लागी पर्ने बताउनुभएको छ । “पार्टीमा देखिएका गुठ उपगुठलाई मिलाएर लैजानु मेरो कर्तव्य हो ।” उहाँले भन्नुभयो, “साथसाथै आगामी दिनमा जिल्लाको विकासमा पनि उत्तिकै डटेर लागीपर्ने छु ।”
सभापति श्रेष्ठले आफूले गर्ने हरेक सकारात्मक काममा सहयोग गर्न कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुलाई अनुरोध समेत गर्नुभएको छ । “गलत कुरालाई गलत भनेर औल्याइ दिनुहोस् ।” कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “सकारात्मक कुराहरुलाई पनि साथ दिन नछुटाउनु हुन अनुरोध गर्छु ।”
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापति ईवन राईले पार्टी सुदृढिकरण पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुभएको छ । यस्तै, क्षेत्र नं. २ का क्षेत्रीय सभापति तीर्थ भट्टराईले पार्टीको निर्देशनलाई पालना गर्दै जनताको विश्वास जित्न अहोरात्र लागी पर्ने बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै युवा नेता रोजन राईले पार्टी नेतृत्वले दम्भलाई त्यागेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । महासमिति सदस्य रविप्रकाश राईले पार्टीका केही साथीहरु सच्चिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पूर्व सभापति तथा महासमिति सदस्य विष्णुकुमार राईले नव निर्वाचित सभापति तथा कार्यसमितिलाई सहयोग गरेर अगाडी बढ्ने बताउनुभएको छ । पत्रकार भेटघाट तथा चियापान कार्यक्रममा पूर्व सभाषद हिरा गुरुङ, जिल्ला तथा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।